Azo Atao ve ny Manao Soa Rehefa Sabata? | Fiainan’i Jesosy
Azo Atao ve ny Manao Soa Rehefa Sabata?
NITORY TANY JODIA I JESOSY
NANASITRANA LEHILAHY MARARY TEO AMIN’NY DOBO IRAY I JESOSY
Be dia be ny zava-bitan’i Jesosy nandritra ny fanompoany tao Galilia. Tsy tao Galilia ihany anefa izy no nieritreritra ny hitory. Hoy mantsy izy: “Tsy maintsy mitory ny vaovao tsaran’ny fanjakan’Andriamanitra any amin’ny tanàna hafa koa aho.” Nitory “tao amin’ireo synagoga tany Jodia” àry izy. (Lioka 4:43, 44) Ara-dalàna izany satria efa lohataona tamin’izay ary efa akaiky ny fankalazana ny Paska tao Jerosalema.
Miresaka betsaka momba ny fanompoan’i Jesosy tao Galilia ny Filazantsara. Tsy dia resahina ao kosa ny fanompoany tao Jodia. Tsy nandray tsara ny ankamaroan’ny olona tao, nefa nazoto nitory sy nanao soa foana i Jesosy, na taiza na taiza.
Nankany Jerosalema, tanàna lehibe indrindra tany Jodia, i Jesosy taoriana kelin’izay mba hankalaza ny Paska taona 31. Nisy dobo lehibe nantsoina hoe Betesda teo amin’ny toerana be olona teo akaikin’ny Vavahadin’ondry. Nisy lala-mitafo teo amin’ilay dobo ary maro ny marary sy jamba ary malemy tongotra tonga teo. Nihevitra mantsy izy ireny fa ho sitrana raha mankao anatin’ilay dobo, rehefa mihetsika ny rano.
Sabata tamin’izay ary nisy lehilahy efa narary nandritra ny 38 taona hitan’i Jesosy teo amin’ilay dobo. Hoy i Jesosy: “Te ho sitrana ve ianao?” Namaly ilay lehilahy hoe: “Tsy mba misy olona mametraka ahy ao anaty dobo, tompoko, rehefa mihetsika ny rano. Fa raha vao manatona aho, dia misy olona misosoka midina eo alohako.”—Jaona 5:6, 7.
Hoy àry i Jesosy: “Mitsangàna, batao ny fandriananao ka mandehana.” (Jaona 5:8) Tsy maintsy ho gaga ilay lehilahy sy izay nandre izany. Nankatò an’i Jesosy izy ka sitrana avy hatrany. Nobatainy ny fandrianany ary nandeha izy.
Tsy faly ny Jiosy rehefa nahita an’ilay fahagagana, ka nanome tsiny an’ilay lehilahy hoe: “Sabata ny andro, ka tsy azo atao izao mitondra fandriana izao.” Hoy ilay lehilahy: “Ka ilay nanasitrana ahy mihitsy ange no nilaza tamiko hoe: ‘Batao ny fandriananao ka mandehana’ e!” (Jaona 5:10, 11) Nokianin’ireo Jiosy ireo ilay olona nanasitrana tamin’ny Sabata.
Hoy izy ireo: “Iza izany olona nilaza taminao izany hoe: ‘Batao ny fandriananao ka mandehana’?” Nahoana izy ireo no nanontany an’izany? Satria “efa niala teo i Jesosy” ary feno vahoaka teo. Tsy fantatr’ilay lehilahy koa ny anaran’i Jesosy. (Jaona 5:12, 13) Mbola nihaona tao amin’ny tempoly anefa izy ireo tatỳ aoriana, ka fantany ilay nanasitrana azy.
Nankany amin’ireo Jiosy nanontany azy ilay lehilahy avy eo, ary nilaza fa i Jesosy no nanasitrana azy. Nankany amin’i Jesosy àry ireo Jiosy. Tsy mba hahalalana hoe ahoana no nahavitan’i Jesosy an’ireny zava-mahagaga ireny anefa, fa mba hanakianana azy noho izy nanao soa tamin’ny Sabata. Nanomboka nanenjika azy mihitsy izy ireo.
Nahoana i Jesosy no nankany Jodia ary inona foana no nataony?
Nahoana ny olona maro no nankeo amin’ilay dobo atao hoe Betesda?
Inona no fahagagana nataon’i Jesosy teo amin’ilay dobo, ary inona no nataon’ny Jiosy sasany rehefa nahita izany?
Hizara Hizara Azo Atao ve ny Manao Soa Rehefa Sabata?